PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-11-12 - EZEMISAKAZO:
Ilanga langeSonto - 2017-11-12 - Izindaba - ZOWAKHA MBATHA
SEZIHUBELA sakusha manje, sesibheke ngqo kwinjabulo yamaholide kazibandlela (December).
Lesi sikhathi sonyaka siba nomkhulu umthelela kokwenzeka nasemisakazweni njengoba iningi leziteshi lisuke lifuna ukuhambisana negidigidi lamaholide.
Imisakazo eminingi inciphisa izinhlelo zezingxoxo, kuze kuncishiswe namahora okufundwa ngawo izindaba imbala. Izinhlelo eziningi ezijwayeleke njalo ntambama maphakathi nesonto ngasehoreni lesithupha ziyaye zigaxwe izembe.
Lokhu kusho ukuthi izinhlelo ezihlabahlosile ezikhonzwe kakhulu njengaBasiki Bebunda okhozini FM olushayelwa ngabasakazi abehlukene, italk on 2000 kathami Ngubeni kwiradio 2000, IPM Live katsepiso Makwetla kwiSAFM, Indaba ka-alex Mthiyane kwigagasi FM, isfiso Sibisi Talk kwizwi Lo Mzansi nezinye eziningi ezithandwa ngabajwayele ukulalela izingxoxo ezijulile ngalesi sikha-thi sosuku zizophazamiseka.
Kusuke kugxilwe ebumnandini ngalesi sikhathi sonyaka kangangokuba neziteshi zezingxoxo imbala njengabo OSAFM, 702 nezinye zishintsha ukuqalaza.
Qaphela ngenhla ukuthi sifake ezenza inzuzo, ezisa- kazela umphakathi nje ojwayelekile nokukubeka ngokusobala ukuthi ukwenza kushintsha kuzo zonke izinhlobo zomsakazo.
Kwezezingxoxo kuyaye kugxilwe ezindabeni ezilula nje ezingajulile njengokujwayelekile. Nakuba lesi sikhathi singayizuzela inqwaba yabalaleli imisakazo nabasuke bengazi ngesinye isikhathi ngokwenzeka emsakazweni ngoba bexinwe yizimo zempilo kodwa imisakazo yanquma ukwenza lokhu ekwenzayo.
Ngiyaye ngicabange nje ukuthi nangamaholide aphakathi nonyaka imisakazo iyaziphuthisela ngokuba ishintshe izinhlelo, iphumuze labo abasuke bengena nsuku zonke.
Kuze kube namuhla kunabalaleli abagcina bephoqeleka ukulalela umsakazo ngenxa yezimo zempilo okufaka nomsebenzi phakathi. Ngenxa yalezi zimo bagcina bengakwazi ukulalela abasakazi abangena ngalezi zikhathi abasuke bebambeke ngazo bona.
Cabanga-ke bengasalitholi nethuba lokubalalela uma kuyiholide ngoba nakhu umsakazo uthathe isinqumo sokuphumuza abajwayele ukubamba lezo zinhlelo. Iqiniso lithi umuntu obambile akasoze afana nomuntu olwenza nsuku zonke uhlelo.
Isibonelo nje umpho Madise odume ngelikamo G kwimetro FM ungumsakazi oluxebulayo uhlelo kodwa uphenduka afane nomdlali okhahlela ngonyawo olulodwa uma ebambele UDJ Fresh ohlelweni lwasekuseni.
Ngibona imisakazo izilahlekisela ngempela ngokushintsha ukwenza uma kuyiholide. Kwehlukile kancane okwalesi sikhathi esibheke kuso kodwa nakhona kusuke kuyithuba lokuba labo abangakaze babe nethuba lokulalela abasakazi beziteshi abazithandayo usuku lonke, bathole lelo thuba.
Thina nje esiyikhonze ngempela imisakazo, kungakhathalekile ukuthi hlobo luni lohlelo olusemoyeni, sibhekene nenkinga yokushintshashintsha iziteshi njalo ntambama ngoba sifuna la manoni ehlukene kuze kuyolamula okungenani ihora lesi-8.
Kuzoba lula-ke ukukhetha ngozibandlela wodumo njengoba kulula ukuzwa uhlobo lomculo owuthandayo, bese ugxila kuleso siteshi kanti ingxoxo ishintsha umzuzu nomzuzu. * Singayithokozela kakhulu neyakho imibono ngakho konke okuthinta ezemisakazo kule engezansi nasezinkundleni zokuxhumana okutholakala kuzo umbhali. Instagram: @zowakha Facebook: Zowakha Mbatha Twitter: @Zowakha zowakha@ilanganews.co.za